မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] - Page 4
152 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th November 2009, 6:05 pm
lichinghwee wrote: MITR မှ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ IT ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ မသိတာလေးတွေလည်း ဖြေပေးကြပါခင်ဗျာ။
/-tt@Ck3r နဲ့ အသိတွေဆိုပါလား။ ပညာတွေ မျှဝေပေးဦးနော်။ တားတားတို့က ဘီဂင်နာတွေမို့လို့ အစ်ကိုတို့ဆီကဘဲ သင်ရမှာ။
153 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th November 2009, 6:10 pm
mmso chat box ထဲမှာ ဘယ်သူကိုလင့်ပေးထားတာလဲတော့မသိဘူး ကျွန်တော်တွေ့လို့ဝင်လာတာ ။ ဒီမှာ ကျွန်တော်သိတဲ့ forum ပေါ်က ဘော်ဘော်တွေအများကြီးဘဲ ။
154 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th November 2009, 6:14 pm
ET wrote: ညီမလေး ပုတု ပြောပြတဲ့ ဂျိုကာလား
ဟုတ်ဘူးဗျ အဲဒါဆိုလူမှားတာ ဗျ ။ ဒီမှာကျွန်တော်သိတဲ့လူတော်တော်များများတော့ရှိတယ်ဗျ ။
155 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th November 2009, 6:16 pm
mz ကနဲ့တူတယ်နော် ။ မင်္ဂလာပါ ဗျာ ကျွန်တော်လည်း ခုမှရောက်တာ ကြိုဆိုပါတယ်။
156 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th November 2009, 6:24 pm
ဟုတ်တယ်အကို ဒီမှာလည်း ရေးပေးပါဦး ။စောင့်ဖတ်မယ် ။
157 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th November 2009, 6:25 pm
MZ မှ ကိုကိုဝင်း အားကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ .. [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
ပညာများ မျှဝေပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
158 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th November 2009, 6:28 pm
ခင်လည်းခင်နိုင်ပါတယ် [You must be registered and logged in to see this image.]
159 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th November 2009, 6:31 pm
160 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 11th November 2009, 6:16 pm
မောင် b.trash လို့ခေါ်ပါတယ်
အားလုံး လဲ ကူညီကြပါဦး
161 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 11th November 2009, 8:27 pm
ကျွန်တော်တို့Myanmaritresource Forum မှ ကြိုဆိုပါတယ်........ကူညီနိုင်သလောက်လဲကူညီပေးပါမယ်ဗျာ...
အားလုံးသော Member များနဲ လည်း နည်းပညာ Knowledge တွေ share နှိုင်ပါစေဗျာ........
162 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th November 2009, 4:55 pm
ပိစိ လဲ ကြိုဆိုပါတယ်။
မသိတာရှိရင် မေးမှာ ဖြစ်လို့ ထွက်မပြေးပါနဲ့ ... [You must be registered and logged in to see this image.]
163 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th November 2009, 5:01 pm
မင်္ဂလာပါ ကို ကိုကိုဝင်း
ပိစိ မသိတာ ရှိရင်မေးမှာပါ။ (ခက်တာက မသိတာက သိပ်များလွန်းတယ်။) [You must be registered and logged in to see this image.]
164 အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... on 13th November 2009, 10:13 pm
တညျနရော : ၆၆လမ်း၊ ၂၇x၂၈ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-11-13
ကျွန်တော်ကတော့ လွင်ကိုလတ်ပါ။ မန္တလေးမှာမွေး၊ မန္တလေးမှာကြီးပြီး၊ မန္တလေးမှာပဲနေပါတယ်။ အသက်က ၂၄နှစ်ပါ။ နောက်ဆုံးနှစ်အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြုနဲ့ အဝေးသင်ကိုဒီနှစ်ဖြေထားပါတယ်။ ဒီနှစ်ဖြေတယ်ဆိုလို့ အဟုတ်မထင်နဲ့ အရင်နှစ်ကလည်း ဖြေတာပါပဲ။ ဟဲဟဲ... အဝေးသင်ကျောင်းသားတို့ထုံးစံအတိုင်း ကျောင်းသားဘ၀လေးကုန်ဆုံးသွားမှာ ကြောက်လို့ ချွေတာပြီး တက် နေတာ... ဘယ်ရောက်သွားမှန်းသိဘူးနော.. ကိုယ်တော်တာကိုကြွားနေတယ်။ ကွန်ပျူတာလေး မတောက်တခေါက်တက်ပြီး ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်ဝါသနာပါတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်ရင် စိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အားလုံးပဲခင်နိုင်ပါတယ်နော။ အားလုံးပဲ တွေ့ရတာဝမ်းဟာတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကဗိုက်အမြဲဆာနေတတ်လို့.. စတာပါ လမ်းမှာတွေ့ရင် ခေါ်ကြပေါ့နော (မှတ်ချက်။ ပိုက်ဆံမရှိချိန်ခေါ်လျှင် အလွန်မာနကြီးပါသည်။ လှည့်မကြည့်တတ်ပါ။)
အကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ပါ..သို့သော် အဆိုးဆုံးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။
165 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 14th November 2009, 7:36 am
166 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 14th November 2009, 1:54 pm
MITR ဖိုရမ်ကနေ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ
167 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 14th November 2009, 1:56 pm
ကျနေ်ာလည်း လာရောက်ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာ
168 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 14th November 2009, 3:41 pm
169 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th November 2009, 2:42 am
ဟိုက်ရှားပါး တော်တော် ပွင့်လင်းတယ်နော် .. ကောင်းတာပေါ့ .. မတွေ့ခင်ကတည်းက ရှောင်လို့ရတာပေါ့ အမြဲတမ်းဗိုက်ဆာနေတယ်ဆိုလို့ .. ဟီး ... စတာနော် ..
ဖိုရမ် ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ... ဖိုရမ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော ... ဖိုရမ်ထဲမှာ လျှောက်လည်ရင်း ကိုယ်ကြိုက်တာကလေးတွေ လည်းကောက်သွားရင်း .. အမြင် မသင့်တာလေးတွေ ကို ၀င်ပြီးတော့ ဖြေရှင်းပေးရင်းနဲ့ပေါ့.. သိတာကလေးတွေလည်း မျှဝေပေးဦးနော် ..
170 Hello all myanmar it resource member on 15th November 2009, 7:54 pm
Let's me introduction my self. i am ogre ..nice to see with all my friend... i am new member...
be happy all myanmaritresource member... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
171 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th November 2009, 8:25 pm
Glad to meet u too
may u be happy and Learning this forum
172 မိတ်ဆက်ပြီး စကားပြောကြရအောင် on 15th November 2009, 8:45 pm
ဒီနေရာလေးမှာ ဆိုဒ်ထဲက member တွေရဲ့ နာမည်နဲ့
gmail account လေးတွေ ရေးပေးကြပါနော်
ကျနော်ကို ဒီနေရာမှာ ဒီလို ခေါ်နိုင်ပါတယ်
လိပ်စာက [You must be registered and logged in to see this link.]
အားလုံးသောသူငယ်ချင်းများကို Welcome from MITR
173 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 16th November 2009, 3:10 am
ကို Ogre ကြီးပါ ရောက်လာတာကိုး .. ကြိုဆိုပါတယ် ကို Ogre ရေ .. ဖိုရမ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျိုး ... သိတာလေးတွေကိုလည်း ပြောပြဦးနော် .. တားတား တို့က ဘာမှ တိတေးဘူး ..
174 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 16th November 2009, 7:41 am
ဒါဆို ကျနော် invite လုပ်လိုက်ပြီနော်
အကူအညီလိုရင် Gtalk ကနေ လှမ်းမေးလို့ ရအောင်
အမည် = တွတ်ပီ
လိပ်စာက [You must be registered and logged in to see this link.] ပါ
175 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 16th November 2009, 11:26 am
MITR Nick Name = z3r0c00l
Gmail Address = [You must be registered and logged in to see this link.]
176 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 16th November 2009, 4:53 pm
i am just beginner so i need to study more than...... than greeting ko ET and KO htet
177 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 16th November 2009, 6:09 pm
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ .. ကို Ogre .. ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးပေးပါ ..
178 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 16th November 2009, 6:16 pm
ခင်လည်းခင်နိုင်ပါတယ် သိတာလေးတွေလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါဦး မသိတာလေးတွေရှိလည်းမေးပေါ့ဗျာ
179 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 16th November 2009, 6:28 pm
ကျွန်တော်ထင်တယ် ဒီလိုမျိုး quote လုပ်ပြီးပေးရင်ပိုကောင်းမယ်
နို့မို့ဆို social enginneering နဲ့ဟက်ခံထိနိုင်တယ်နော်
180 ကျနော်လည်း မိတ်ဆက်လိုက်တယ်ဗျာ on 16th November 2009, 6:49 pm
ကျနော်လည်း အာလုံးကို ခင်ချင်ပါတယ်ဗျာ
181 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 17th November 2009, 12:30 am
တူညားတွေတော့ ကြောပီးတွားပီ ..
အနော့် မေးလ် ကတော့
ပါခင်ဗျာ .. ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ ...
182 အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.. on 17th November 2009, 9:14 pm
MITR မှ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...ကျနော် က ဒီဖိုရမ် ကို အခု မှ ရောက်လို့ပါ.. မသိတာလေး တွေ ဖြေပေးကြပါ.. [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
183 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th November 2009, 5:22 pm
ကြိုဆိုပါတယ်.... Firen ခင်ဗျာ....ကျွန်တော်တို Myanmaritresource Forum မှာနည်းပညာတွေ
184 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th November 2009, 6:00 pm
ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ .. ပျော်ရွှင်ပါစေ .. [You must be registered and logged in to see this image.]
185 ကျေးဇူးတင်ကြောင်း on 18th November 2009, 6:02 pm
ကျနော့် ကို နွေးထွေး စွာကြိုဆိုပေးတာ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...ဗျာ.....ကျနော့် ကို ခင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ [You must be registered and logged in to see this link.] ကို အပ်ပီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်.....
186 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 19th November 2009, 5:48 pm
ogre wrote: Let's me introduction my self. i am ogre ..nice to see with all my friend... i am new member...
ကို Ogre ရောက်လာပါလား။
ကျနော့်ကို သိမယ်ထင်ပါတယ်။ MCO မှာ ပြဿနာရှာပြီးတော့ ထွက်သွားတဲ့ကောင်လေးပါ။
မနှိပ်ရဆိုတဲ့ HTML Page ရဲ့ CODE တွေကို အစ်ကို့ဆီကတောင်းဖူးပါတယ်။
အစ်ကို့ကို ကျနော်ဘာမှမသိသေးတုန်းက လေးစားခဲ့ရသလို အခုထိလည်း လေးစားလျက်ပါ။
187 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th November 2009, 9:32 pm
ကျွန်တော် က လဲ အားလုံးကို ခင်မင်လေးစားပါတယ်...ကြေင်ရှိရင် email send လို့ရအောင် email
address လေးတွေရ ရင် ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်... ကျွန်တော် email က [You must be registered and logged in to see this link.] ပါ.... တခြား ပြသနာများမရှိကြရင် add ပေးပါ...မဟုတ် ရင်လဲ ဒီနေရာ လေး မှာ email ပေးကြပါ...
188 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st November 2009, 9:20 am
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကို Ogre ။ ၀မ်းသာအားရ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ Email ပေးပြီးတော့ စကားပြောရအောင် (မိတ်ဆက်စကားပြောရအောင်) ဆိုတဲ့ Post အသစ်တစ်ခုတင်ထားပါတယ်အစ်ကို။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ Email လေးတွေမျှဝေဖို့ပါအစ်ကို။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
189 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st November 2009, 9:09 pm
ok ဗျာ [You must be registered and logged in to see this link.] ကျွန်တော် သွားပြီး မိတ်ဆက်လိုက်ပါမယ်...Thank..
190 မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ............ on 24th November 2009, 9:50 pm
တညျနရော : Tamwe
ကျွန်တော်ကတော့ ကျော်ထွဋ်ပါခင်ဗျာ... တခြား Ning တွေ forum တွေမှာတော့ ဝင်ထားပါတယ်.. ကျွန်တော်က ပိုစ့်တော့ မရေးတတ်ဘူးခင်ဗျ.. အဲဒါကြောင့် ဖတ်တာပဲများပါတယ်... ကျွန်တော် networking နဲ့ wireless အကြောင်းကို အထူးစိတ်ဝင်စားပါတယ်.. လေ့လဲလေ့လာနေပါတယ်.. ဒီက ဆွေးနွေးထားချက်များကိုလဲ ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်.. တော်တော်လေးလဲ ဗဟုသုတရပါတယ်... ကျွန်တော့်ကိုလဲ ကူညီကြပါ... ကျွန်တော်သိတာလေးတွေ ရှိလဲဝင်ဖြေပေးပါ့မယ် ခင်ဗျာ.... networking နဲ့ wireless နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းများရှိရင်လဲတင်ပေးကြပါ.. .. ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာလေးကူညီကြပါခင်ဗျာ.. [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
191 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 25th November 2009, 2:44 pm
ကို ဇေ ပါ ခင်ညာ
အားလုံ ကို နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
192 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 25th November 2009, 3:32 pm
KyawHtut wrote: ကျွန်တော်ကတော့ ကျော်ထွဋ်ပါခင်ဗျာ... တခြား Ning တွေ forum တွေမှာတော့ ဝင်ထားပါတယ်.. ကျွန်တော်က ပိုစ့်တော့ မရေးတတ်ဘူးခင်ဗျ.. အဲဒါကြောင့် ဖတ်တာပဲများပါတယ်... ကျွန်တော် networking နဲ့ wireless အကြောင်းကို အထူးစိတ်ဝင်စားပါတယ်.. လေ့လဲလေ့လာနေပါတယ်.. ဒီက ဆွေးနွေးထားချက်များကိုလဲ ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်.. တော်တော်လေးလဲ ဗဟုသုတရပါတယ်... ကျွန်တော့်ကိုလဲ ကူညီကြပါ... ကျွန်တော်သိတာလေးတွေ ရှိလဲဝင်ဖြေပေးပါ့မယ် ခင်ဗျာ.... networking နဲ့ wireless နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းများရှိရင်လဲတင်ပေးကြပါ.. .. ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာလေးကူညီကြပါခင်ဗျာ.. [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Myanmar IT Resource ဖိုရမ်ကနေ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
သိထားတာလေးတွေရှိရင်လည်း ပြန်လည်မျှဝေပြီးတော့ မသိတာရှိလည်း မေးနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ Network သမားမဟုတ်တော့ အစ်ကို့ကို ကူညီနိုင်မယ်မထင်ဘူး ၊ ဒါပေမယ့်လည်း ကျနော်ကူညီနိုင်တဲ့ဘက်ရှိရင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီသွားမှာပါ။
တခြား သူတွေက လည်း ကူညီကြပါလိမ့်မယ်။
193 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 25th November 2009, 3:41 pm
ကိုဇေ သိထားတာလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပြီးတော့ မသိတာတွေကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
194 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 25th November 2009, 6:30 pm
ကြိုဆိုပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ Wireless networking ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်
195 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 25th November 2009, 6:32 pm
196 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 25th November 2009, 6:51 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] @ နေကောင်းလား ။ ဟီ ဟီ ဖြီးကြည့် တာ။ ကြိုဆို ပါတယ်ဗျာ။ E-books ကောင်းကောင်းလေးတွေရှိရင်လဲတင်ပေးပါဗျာ...း)
197 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th November 2009, 3:39 pm
ကျွန်တော်ကတော့ networking နဲ့ wireless နဲ့ ပတ်သက်ပြီးသိပ်နားမလည်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် မသိတာရှိရင် မေးမှာ ဖြစ်လို့ထွက်မပြေးပါနဲ့ ဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.]
198 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th November 2009, 4:44 pm
ကျွန်တော့် ကိုလဲ ခင်နိုင်ပါတယ်။
199 အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ... on 26th November 2009, 11:18 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-11-26
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...ကျွန်တော်က ဒီနေ့မှ ဒီဖိုရမ်ကို အသစ်ရောက်လာတဲ့ အဖွဲ့ဝင် အသစ်ပါ..
အခုမှ လေ့လာဆည်းပူးမဲ့လူဆိုလည်း မမှားပါဘူး.........အမြင်မတော်တာတွေ့ရင်လည်း ပြောဆိုဆုံးမပေးပေါ့.....
ကျွန်တော်သိတာလေးတွေရှိရင် လည်း ပြန်လည်မျှဝေပါ့မယ်....
200 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 27th November 2009, 12:23 am
ကြိုဆိုပါတယ် ကိုမျိုးသူရေ ... ဖိုရမ် ကို ရောက်ရင် ရောက်တဲ့လူက မုန့်ကျွေးရတယ် ဗျ သိလား.. ဟိဟိ .. စတာနော်.. တော်ကြာ မုန့်ကျွေးရမှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ ဖိုရမ်မလာပဲမနေနဲ့ဦး .. ဟိဟိ.. ဖိုရမ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုမျိုးသူရေ ။။။... သိတာကလေးတွေ လည်း ပေးခဲ့ဦးနော် ..
201 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 27th November 2009, 7:56 am
202 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting]